Fihazonana ny maha kandidà an’i Neny : Manana teboka hifaharana ny ankolafy Ravalomanana – MyDago.com aime Madagascar
Fihazonana ny maha kandidà an’i Neny : Manana teboka hifaharana ny ankolafy Ravalomanana
Ara-dalàna sy ara-drariny tanteraka ! Manana teboka maromaro ifaharany ny eo anivon’ny ankolafy Ravalomanana ho fanoherana na koa hanamarinana ny maha kandidà ara-dalàna an’i Neny, raha tena hojerena araka ny lalàna fa tsy noho ny resaka politika.
Navoitran’ny fitarainan’ny ankolafy sy ny fampiakarana ary ny tsy fanekena ny fanilihana ny maha kandidà an’i Neny ny fanehoana fa fanapahana fa tsy didy no navoakan’ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (CES) ka ahazoana manao ny fampiakarana na koa fanohanana. Nomena izany fanohanana sy fitarainana izany ny CES, ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) ary ny eo anivon’ny Filankevi-panjakana. Midika io fa azo ivalozana ny didy efa navoakan’ny CES faharoa.
Eo koa ny voalazan’ny Lalàmpanorenana fa monina enim-bolana mialoha ny fanombohan’ny fanaterana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana ny kandidà iray. Nahitsy tamin’ny alalan’ny lalàna fehizoro indray izany ka nambara fa mila ilay olona (vatana) mihitsy ilay fipetrahana eto. Ny Lalàmpanorenana anefa no fara-tampon’ny lalàna.
Tsy vitan’izany. Azo raisina ho ohatra amin’ny andavandron’n y mponina ny tranga momba ny tsy nahatongavan’i Neny sy tsy nahatrarany ny fe-potoana enim-bolana. Raha ohatra nisy olona iray nahafaty olona, tsy maintsy jeren’ny fitsarana sy hadihadiana na nahim-pony na fanahiniana na koa noho ny fiarovan-tenany no antony nahatonga azy hanao izany. Manova didim-pitsarana tokony hivoaka izany…
Kandidà ara-dalàna i Neny
Manampy ireo, nitondran’ny ankolafy Ravalomanana fanamarihana ny fivorian’ny CES sy nandraisany fanapaha-kevitra, tany amin’ny hotely, nialoha ny namoahana iny fanapahana ny fanilihana kandidà iny. Tsy nisy rahateo ny didim-panjakana manova ny toerana na ny foibe na koa ny biraon’ny andrimpanjakana tahaka ireny.
Tsy hita tao amin’ny tatitry ny teo anivon’ny mpitandro filaminana koa fandroahana tamin-kery an-dRavalomanana Lalao raha tonga teny Ivato ny 27 jolay 2012 ka antony ilazana fa tsy nahafeno ny fepetra enim-bolana voalazan’ny lalàna izy. Fanosihosena ny zon’olom-pirenena sy ny on’olombelona avokoa anefa izany amin’ny fahazoana mivezivezy, miditra sy mivoaka ivelan’ny fireneny. Tsy misy olom-pirenena azo roahina hivoaka ny fireneny rahateo.
Takin’ny ankolafy Ravalomanana noho izany ny hanaovana azon’ny besinimaro atrehina ahafahany miaro ny maha kandidà ani Neny.
Raha miainga amin’ireo voalaza ireo, kandidà ara-dalàna Ravalomanana Lalao. Ny ankoatra izay, resabe sy ambadika politika avokoa !
Auteur Solo Razafy*Publié le 21 août 2013 Catégories Politique
10 pensées sur “Fihazonana ny maha kandidà an’i Neny : Manana teboka hifaharana ny ankolafy Ravalomanana”
Zany ô!!!! Dia inona indray hono ny plan manaraka??? Tsy efa tonga « plan Z » ve ianareo zay?
21 août 2013 à 18 h 26 min
Karakarao haingana ary.
21 août 2013 à 20 h 50 min
RAHA FAMPIANARANA LALANA DIA NY MOUVANCE RAVALOMANANA DIA VOALOHANAY Ary Nampikatso ny raharaha izany atramin izay .
DESOBEISSANCE ,ary ireo ministra sy ny tafiditra ao @ systéme no manomboka ARY IZY IREO NO MANENTANA NY VAHOAKA HANARAKA AZY .
Iano ve ministra sy vice Président assemblée ,CT sy vice ministre no HIHANTSO VAHOAKA dia tsy HAMALY NY VAHOAKA .???
22 août 2013 à 7 h 13 min
Mbola averiko foana fa ny vahoaka manana ny rariny foana no mandefitra hatreto. Diso paika tanteraka ny movansy Ravalomanana hatramin’izay 4 taona izay, ary tsy misy mihaino ny vahoaka ianareo rehetra ireo. Ho fanarenana izany dia mila anareo hiroso amin’ny dingana HENJANA amin’izay fa tsy ilaozana be bla bla eo fotsiny, ny vahoaka efa miandry fotsiny fa ianareo mpitarika no be politika mitady izay hihinanana fotsiny. Sao hifototra aminareo izao ataonareo izao tsy ho ela ka mieritrereta ihany lahy…
1- Ndao atao hoe 4 taona no efa nampidirany renindozatra ny fitaovam-piadina sy ny mpitsikilo isankarazany sy ny fividianana ny karana sy tompon-tany @ « nationalité + villa +4*4 ».
2- Ny vahoaka kosa dia noterena hivavaka sy hanantena izay noheverino ho mptari-tolona anefa hitany izao fa miara misa @ domelina.(paika avy renindozatra daholo ihany io)
3- Tsy mifandanja be mihintsy ny tranga ka tsy ho vohavaha ny olana raha tsy misy:
*** tanjona mazava hikaroka fanampina avy ivelany e!
*** fivonona matotra ny hanaraka drafitra sy fomba fiasa afa fa tsy toy ny any « ENA à la franco-française ».
Ezaka be izany fa rehefa tena sempotra anie ka toa mahita paika samihafa ahazahoana rivotra sa ?
Any ny fitiavana tanindrazana nasehony filohantsika fa tsy nety azon-dragalasamy tena mbola dontony « francophonie hatrizay ka hatrizao ».
Lejama dit :
» Ranavalona ve sao de mba manana stratégie ambony kokoa hitondrana ny tolona ankoatry ny fijanonana ho mpanaratsy fotsiny hoe rajakombazaha sy voavidy miliara ? Efa hatramin’ny ela mantsy ny ankamaroantsika eto no mitanisa izao oha-pitenenana ratsy rehetra izao hilazàna fa mankahala mafy izay tsy mitovy fijery amintsika. »
Misy efa maika handray seza mafy mihintsy izy izany , kkkay mbola nisy INDRO KELY!!!!
mbola mahazo miady varotra indray kah!!!io Chissano Neny ah!!!ataovy mahamay fa Rajako.
Ampahafantaro azy ny lalàna velona fa Gena be tsy mahalala izay ambonin’ny tany, tokony koa ny rehetra
haneo an’ity Gena Chissano ka hitondra sora- baventy eo anoloan’ny hotely misy azy mba hanehoana ny tsy
fankasitrahana ny FITONGILANANY @ Mpanjanaka.
Avy amin’i Ryan TIM:
Hahahahahah, tsara be le théorie e…. Tanteraho ary ho ita
22 août 2013 à 17 h 24 min
Ianareo aza tsy misy théorie raha tsy ao-damosinareo ny vozongo nanalika ny razambenareo.Tohano ihany ny vozongo!efa maimbo ny tanàna mbola tsy tonga saina ihany.
Précédent Article précédent : La demande en exception d’inconstitutionnalité formulée par le Président du Congrès de la Transition, est déclarée irrecevable
Suivant Article suivant : Liste définitive des candidats : Chissano est là…